ကလေးမွေးပြီးတဲ့နောက် သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြလဲ? – Trend.com.mm
ကလေးမွေးပြီးတဲ့နောက် သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြလဲ?
Posted on November 30, 2018 by Noel
တစ်ချို့မိန်းမသားတွေဟာ ကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန်မထိန်းနိုင်ပဲဝလာတတ်ကြပါတယ်။ပြီးတော့ ကလေးလည်းရှိနေပြီပဲ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းစရာမလိုတော့ပါဘူးလေဆိုပြီး နေလိုက်ကြတယ်။တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်ရော၊ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်အတွက်ရော၊ကိုယ်လှနေဖို့အတွက်ပါကိုယ်အလေးချိန်ကိုပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။တကယ်အချိန်ပေးပြီး ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင် အချိန်တိုအတွင်းလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပြန်ပြီးရလာမှာပါ။
သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးပုံကျလှပအောင်ကြိုးစားရပါတယ်။ဒါကြောင့် ကလေးမွေးပြီးလို့ ကိုယ်အလေးချိန်မထိန်းနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ မေမေတို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေဖို့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဝိတ်ချပုံ ၀ိတ်ချနည်းလေးတွေကို ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
J.Lo ဟာ ရင်သွေးလေးမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက် ပထမဆုံးလတွေအတွင်း လမ်းပုံမှန်လျှောက်ခြင်းနဲ့သာ လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြန်ပြီးစလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် ၄မိုင်ပြေးတယ်၊မိုင်ဝက်လောက်ရေကူးတယ်။၁၈မိုင် စက်ဘီးစီးရင်း သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပုံကျအောင်ပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာပါ။
Halle Berry ဟာဆိုရင် ရင်သွေးလေးမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက် ၃၅ပေါင်တောင်တက်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးပြန်ရဖို့ သူမက ထမင်းစားတဲ့အခါ သုံးနပ်မစားပဲ နည်းနည်း နည်းနည်းချင်းစီစားဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဆိုဒီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေ၊အကြော်အလှော်တွေရှောင်ပြီး
နာမည်ကျော်မင်းသမီးချော Jessica Alba ကလည်း သူမရဲ့ သမီးလေး Honor မွေးပြီးချိန်မှာ ၃၅ ပေါင်နီးပါးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်လိုလှပတဲ့ကောက်ကြောင်းလေးပြန်ရဖို့အတွက် သူမဟာ ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းကိုဦးစားပေးပြီး နေ့တိုင်း မိနစ် ၂၀ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှ ကိုယ်အလေးချိန်မြန်မြန်ကျစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တွဲဖက်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးသုံးယောက်အမေဖြစ်ပေမဲ့ Beyoncé ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အမြဲလှပနေတာသတိထားမိကြတယ်မဟုတ်လား။သူမရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းတဲ့နည်းလမ်းက မထင်မှတ်ထားစရာပါပဲ။Beyoncé က “ကလေးနို့တိုက်ရင်း ကိုယ်အလေးချိန်မြန်မြန်ကျသွားတာပါ။ဒါကြောင့် တစ်ခြားမိခင်တွေကိုလည်းကိုယ့်ရင်သွေးကို ကိုယ်တိုင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါက ကလေးအတွက်ရော၊ကိုယ့်အတွက်ပါ ကောင်းပါတယ်”လို့ အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။
Reese Witherspoon ကတော့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အစားအသောက်ညီညွတ်မျှတအောင်စားတာ၊ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊တောင်တက်တာ၊အကလေ့ကျင့်တာတွေနဲ့သာ ထိန်းသိမ်းပါတယ်တဲ့။ဒီလိုကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာ စိတ်ရှည်ဖို့လည်းလိုပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ပြန်ပြီးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့လည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ကလေးသုံးယောက်မိခင် Kim Kardashian ဟာ သူမရဲ့ ဒုတိယမြောက်ကလေးကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ ပေါင် ၇၀လောက်ကျသွားပါတယ်။အဲ့ဒါရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် အစားအသောက်ကိုညီညွတ်မျှတစွာစားခြင်းပါပဲတဲ့။သူမက Atkins Diet ကိုလုပ်တယ်လို့သိရပြီး အဲ့ဒီနည်းက သူမအတွက်တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြသွားပါတယ်။
ကလေးလေးယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားသူ Jennifer Garner ကတော့ သူမရဲ့ လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးပြန်ရအောင် ပထမဆုံးကလေးမွေးပြီးကတည်းကသေချာထိန်းသိမ်းခဲ့တာပါ။ကလေးမွေးဖွားပြီး ၂လအတွင်းမှာပဲ ကျစ်လစ်လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပရိသတ်တွေကို အံ့သြစေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ ကလေးတွေနဲ့အတူကစားတာပါပဲတဲ့။ကလေးတွေကိုကြည့်ရုံတင်စောင့်ကြည့်မနေပဲ သူတို့လေးတွေနဲ့အတူ ကစားေးတာက ကလေးတွေကို ပျော်ရွှင်စေသလို ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းထိန်းသိမ်းပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေနဲ့ ၄၅မိနစ်လောက်ကစားပေးတာက ကယ်လိုရီ ၂၀၀ လောက်လောင်ကျွမ်းစေတယ်လို့သိရပါတယ်။
သူတို့တွေလို အများကြီးအချိန်မပေးနိုင်ရင်တောင် တစ်နေ့ကို ၁၅မိနစ်၊နာရီဝက်လောက် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အချိန်ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်လေးကို သေချာပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းပါလို့ တိုက်တွန်းအကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
တဈခြို့မိနျးမသားတှဟော ကလေးမှေးပွီးတဲ့အခါ ကိုယျအလေးခြိနျမထိနျးနိုငျပဲဝလာတတျကွပါတယျ။ပွီးတော့ ကလေးလညျးရှိနပွေီပဲ ကိုယျအလေးခြိနျထိနျးစရာမလိုတော့ပါဘူးလဆေိုပွီး နလေိုကျကွတယျ။တကယျတော့ ကိုယျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျရော၊ကိုယျ့ရဲ့အိမျထောငျဘကျအတှကျရော၊ကိုယျလှနဖေို့အတှကျပါကိုယျအလေးခြိနျကိုပွနျပွီးထိနျးသိမျးသငျ့ပါတယျ။မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာလညျးမရှိပါဘူး။တကယျအခြိနျပေးပွီး ကွိုးစားလိုကျမယျဆိုရငျ အခြိနျတိုအတှငျးလှပတဲ့ခန်ဓာကိုယျလေးကို ပွနျပွီးရလာမှာပါ။
သူတို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျပွနျပွီးပုံကလြှပအောငျကွိုးစားရပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ကလေးမှေးပွီးလို့ ကိုယျအလေးခြိနျမထိနျးနိုငျဖွဈနတေဲ့ မမေတေို့အတှကျခှနျအားဖွဈစဖေို့ အနုပညာရှငျတှရေဲ့ ဝိတျခပြုံ ၀ိတျခနြညျးလေးတှကေို ပွနျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
J.Lo ဟာ ရငျသှေးလေးမှေးဖှားပွီးတဲ့နောကျ ပထမဆုံးလတှအေတှငျး လမျးပုံမှနျလြှောကျခွငျးနဲ့သာ လကေ့ငျြ့ခနျးကို ပွနျပွီးစလုပျခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီနောကျ ၄မိုငျပွေးတယျ၊မိုငျဝကျလောကျရကေူးတယျ။၁၈မိုငျ စကျဘီးစီးရငျး သူမရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကိုပုံကအြောငျပွနျပွီးထိနျးသိမျးခဲ့တာပါ။
Halle Berry ဟာဆိုရငျ ရငျသှေးလေးမှေးဖှားပွီးတဲ့နောကျ ၃၅ပေါငျတောငျတကျခဲ့ပါတယျ။သူမရဲ့ လှပတဲ့ခန်ဓာကိုယျလေးပွနျရဖို့ သူမက ထမငျးစားတဲ့အခါ သုံးနပျမစားပဲ နညျးနညျး နညျးနညျးခငျြးစီစားဖွဈပါတယျတဲ့။ဆိုဒီယမျကွှယျဝတဲ့အစားအစာတှေ၊အကွျောအလှျောတှရှေောငျပွီး
နာမညျကြျောမငျးသမီးခြော Jessica Alba ကလညျး သူမရဲ့ သမီးလေး Honor မှေးပွီးခြိနျမှာ ၃၅ ပေါငျနီးပါးတကျလာခဲ့ပါတယျ။အရငျလိုလှပတဲ့ကောကျကွောငျးလေးပွနျရဖို့အတှကျ သူမဟာ ကွှကျသားလကေ့ငျြ့ခနျးကိုဦးစားပေးပွီး နတေို့ငျး မိနဈ ၂၀ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။နောကျပိုငျးမှ ကိုယျအလေးခြိနျမွနျမွနျကစြတေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို တှဲဖကျလုပျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ကလေးသုံးယောကျအမဖွေဈပမေဲ့ Beyoncé ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအမွဲလှပနတောသတိထားမိကွတယျမဟုတျလား။သူမရဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျထိနျးသိမျးတဲ့နညျးလမျးက မထငျမှတျထားစရာပါပဲ။Beyoncé က “ကလေးနို့တိုကျရငျး ကိုယျအလေးခြိနျမွနျမွနျကသြှားတာပါ။ဒါကွောငျ့ တဈခွားမိခငျတှကေိုလညျးကိုယျ့ရငျသှေးကို ကိုယျတိုငျနို့ခြိုတိုကျကြှေးဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။အဲ့ဒါက ကလေးအတှကျရော၊ကိုယျ့အတှကျပါ ကောငျးပါတယျ”လို့ အကွံပေးခဲ့ပါတယျ။
Reese Witherspoon ကတော့ သူမရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို အစားအသောကျညီညှတျမြှတအောငျစားတာ၊ယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာ၊တောငျတကျတာ၊အကလကေ့ငျြ့တာတှနေဲ့သာ ထိနျးသိမျးပါတယျတဲ့။ဒီလိုကိုယျအလေးခြိနျထိနျးသိမျးတဲ့နရောမှာ စိတျရှညျဖို့လညျးလိုပွီး ဖွညျးဖွညျးခငျြးကိုယျ့ကနျြးမာရေးကို ပွနျပွီးကောငျးမှနျအောငျလုပျဖို့လိုပါတယျလို့လညျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ကလေးသုံးယောကျမိခငျ Kim Kardashian ဟာ သူမရဲ့ ဒုတိယမွောကျကလေးကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျမှာ ပေါငျ ရဝလောကျကသြှားပါတယျ။အဲ့ဒါရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြ အစားအသောကျကိုညီညှတျမြှတစှာစားခွငျးပါပဲတဲ့။သူမက Atkins Diet ကိုလုပျတယျလို့သိရပွီး အဲ့ဒီနညျးက သူမအတှကျတျောတျောလေးအလုပျဖွဈတယျလို့ပွောပွသှားပါတယျ။
ကလေးလေးယောကျပိုငျဆိုငျထားသူ Jennifer Garner ကတော့ သူမရဲ့ လှပတဲ့ခန်ဓာကိုယျလေးပွနျရအောငျ ပထမဆုံးကလေးမှေးပွီးကတညျးကသခြောထိနျးသိမျးခဲ့တာပါ။ကလေးမှေးဖှားပွီး ၂လအတှငျးမှာပဲ ကဈြလဈလှပတဲ့ခန်ဓာကိုယျနဲ့ပရိသတျတှကေို အံ့သွစခေဲ့သူဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြကတော့ ကလေးတှနေဲ့အတူကစားတာပါပဲတဲ့။ကလေးတှကေိုကွညျ့ရုံတငျစောငျ့ကွညျ့မနပေဲ သူတို့လေးတှနေဲ့အတူ ကစားေးတာက ကလေးတှကေို ပြျောရှငျစသေလို ခန်ဓာကိုယျကိုလညျးထိနျးသိမျးပွီးသားဖွဈစပေါတယျလို့ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ကလေးတှနေဲ့ ၄၅မိနဈလောကျကစားပေးတာက ကယျလိုရီ ၂၀၀ လောကျလောငျကြှမျးစတေယျလို့သိရပါတယျ။
သူတို့တှလေို အမြားကွီးအခြိနျမပေးနိုငျရငျတောငျ တဈနကေို့ ၁၅မိနဈ၊နာရီဝကျလောကျ ကိုယျ့အတှကျကိုယျအခြိနျပေးပွီး ခန်ဓာကိုယျလေးကို သခြောပွနျပွီးထိနျးသိမျးပါလို့ တိုကျတှနျးအကွံပွုလိုကျပါတယျ။
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Tiffany ရဲ့ “Peppermint” သီချင်းလေး နားထောင်ပြီးကြပြီလား ?
ဒူး နဲ့ အရွတ်တွေကို သန်မာစေမယ့် သဘာဝအစားစာတွေ